Kaamiro cusub oo lagu ogaan karo in qofka faraxsanyahay ama halis yahay - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Affectiva
Shirkadda Affectiva ayaa sheegtay in aalladan cusub ay aqoonsan karto shucuurta wajiga
Qalabka wajiga lagu aqoonsan karo ayaa aad usoo kordhaya, waxaana sare u kacaya isticmaalka kala duwan ee qalabkan, waxaana hadda lasoo saaray kaamirooyin garan kara in uu qofka faraxsanyahay iyo in uu yahay qof murugsan oo halis kasoo fool leedahay.
Waxyaabaha kale ee ay sahlayaan waxaa ka mid ah in kala aqoonsadaan dadka xudduudaha dalalka ka talaabaya, in lagu furto laguna xirto taleefoonada caaqilka ah, in lagu garto dambiilayaasha, iyo sidoo kale in lagu isticmaalo adeegyada bangiyada.
Agaasimaha shirkadda Apple oo wiil uu adeer u yahay u diiday isticmaalka baraha bulshada
Hadda waxa la sheegayaa in xitaa dareenka ama shucuurta dadka uu kala fahmi karo.
Taleefoonka iPhone X ayaa lagu furi karaa wajiga qofka
Shirkadda Affectiva oo hawshan ka dambeysa ayaa sheegtay in ay duubtay shucuurta kala duwan ee dad dhawr ah oo ogolaansho laga heley, kadibna la baray qalabka shucuurtaas, waxaana markii dambe la sameeyay tijaabo ah in dad kale lagu tijaabiyo.
Xigashada Sawirka, WeSee
Shucuurta ka muuqata qof iyo xaaladda uu ku suganyahay
Xaaladaha muranka dhaliyay ayaa waxaa ka mid ah in shirkadaha soo saara qalabkan ay kasii iibinayaan laamaha ammaanka, kuwaas oo u isticmaalaya sababo la xiriira baaritaanada iyo amniga, waxaana loo arkaa mid loogu xad gudbayo xuquuqda dadka.
Dad badan oo meel isugu tagay
Waxaa kale oo jirta walwal laga qabo in kaamirooyinka ay soo bandhigi doonaan dareenka rasmiga ah ee qofka, lana qiyaasi karo waxa niyadiisa ku jira, waxaana la isweeydiinayaa waxa dhacaya haddii ay qaldaan saadaasha.
Xigashada Sawirka, South Wales Police
Booliiska South Wales ayaa isticmaala kaamirooyinka aan libiqsan
Markii dad badan ay kasoo qeybgalayeen xaflad uu qabtay raadiyaha BBC Radio 1 bishii May, ma aysan ka warhaynin in booliiska South Wales ay wajiyada dadkaas ku dheehanayeen kaamirooyinka basaaska ah, kuwaas oo wajiyada dadka lagu kala eegayay.
Waxaa dhacday in kaamirooyinka ay dadka ka dhex aqoonsadaan nin uu ka yaalay waaran xarig, waxaana lagu xiray muddo 10 daqiiqo gudahood ah.
Dadka ku nool magaalada Cardiff ee dalka Ingiriiska ayaa dacwad ka gudbiyay booliiska, waxayna sheegeen in qalabka basaasnimada uu ku xad gudbayo xuquuqdooda iyo xoriyadaha.
Xigashada Sawirka, NEC
habka ay isticmaaleen booliiska South Wales
Hase yeeshee Patrick Grother oo ka tirsan mac-hadka Tayo-dhawrka qaran iyo tiknoolajiyadda ee Maraykanka ayaa waxa uu sheegayaa in qalabka uu yahay mid aad la'isugu haleyn karo.
Dalka shiinaha ayaa dhawaan laga hirgaliyay ookiyaal kaamiro ku rakiban oo ay booliiska xiranayaan.
"Habka xisaabaadka ee kumbuyuutaraadka ku jira ayaa u ogolaanaya in ay kala gartaan xaglaha kala duwan ee wajiga iyo fariimaha ku duugan" ayuu yiri Patrick.
"Xitaa haddii uu qofka ookiyaal xiranyahay waad garan kartaa dareenkiisa, inta la qaldami karo aad ayay u yartahay" ayuu intaas ku daray.